नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवव्दारा बीबीसी नेपाली सेवाका पूर्वप्रमुख एबम बरिस्ठ पत्रकार खगेन्द्र नेपाली सम्मानित, हेर्नुस् खगेन्द्र नेपाली सँगको एउटा अन्तर्वार्ता पनि
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवव्दारा बीबीसी नेपाली सेवाका पूर्वप्रमुख एबम बरिस्ठ पत्रकार खगेन्द्र नेपाली सम्मानित, हेर्नुस् खगेन्द्र नेपाली सँगको एउटा अन्तर्वार्ता पनि
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बीबीसी नेपाली सेवाका पूर्वप्रमुख एबम बरिस्ठ पत्रकार खगेन्द्र नेपालीलाई डायमनशमशेर राणा प्रथम सिर्जना पुरस्कार प्रदान गर्नुका साथै खादा पहिराई सम्मान गर्नुभएको छ । नेपालीलाई नेपाली साहित्यको अडियो
बूक उत्पादनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै विशेषरुपमा डायमनशमशेर राणाव्दारा लिखित सेतो बाघ वाचन गरी प्रकाशित गर्नु भएवापत सो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । पुरस्कारको राशी पच्चीस हजार रुपैयांको छ । त्यस अवसरमा राष्ट्र्पति रामवरण यादवले स्वर्गीय डायमनशमशेर राणासंगको आप्mनो भेटघाटको संस्मरण र प्रजातन्त्रप्रतिको वहांको साहित्यिक योगदानको चर्चा गर्नुभयो । राष्ट्र्पतिले खगेन्द्र नेपालीले पत्रकारितामा लामो सफल कार्यकालपछि नेपाली साहित्य तथा संस्कृतिलाई नयां माध्यम अडियो बूकका रुपमा राष्ट्र्यि तथा अन्तरराष्ट्र्यि क्षेत्रमा फैलाउन विशेष योगदान पुर्याउनु भएको भनी त्यसको प्रशंसा गर्नुभयो ।
खगेन्द्र नेपालीले राष्ट्र्पतिबाट प्रथम डायमनशमशेर राणा सिर्जना पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त गरेकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभयो । वहांले डायमनशमशेर राणाको जीवनी र साहित्यिक योगदानवारे अध्ययन अनुसन्धान कार्यका लागि सोही समारोहमा डायमनशमशेर राणा साहित्यिक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष्य ऋषिराम पाण्डेलाई चालिस हजार रुपैयां हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
करिब ३० वर्ष बीबीसी नेपाली सेवामा काम गरें
- खगेन्द्र नेपाली
पूर्वप्रमुख - बीबीसी नेपाली सेवा
सन् १९७९ देखि सन् २००६ सम्म बीबीसी नेपाली सेवामा कार्यरत खगेन्द्र नेपालीलाई नसुन्ने नेपाली स्रोता कमै छन् । हाल उनी सेवा निवृत्त जीवन व्यतीत गरिहेका छन् । सन् १९७९ मा स्थायी कर्मचारीका रूपमा कार्यक्रम उत्पादक (प्रोग्राम प्रोड्युसर) तहबाट उनी बीबीसी रेडियोमा प्रवेश गरेका हुन् । नेपालीले करिब १० वर्ष बीबीसीमा नेपाली सेवा प्रमुख भएर काम गरें । नेपाली सेवाका तत्कालीन कार्यक्रम प्रमुख नेपाली अहिले नेपाली साहित्य जर्गेना गर्ने काममा दत्तचित्त भएर लागेका छन् । उनले आफ्नो ज्ञान र सीप सदुपयोग गर्दै नेपाली साहित्यकारका उत्कृष्ट कृतिहरूमा आफ्नो सुमधुर स्वर भरेर ‘अडियो बुक’ तयार गर्ने काम गर्दै आएका छन् । सेवानिवृत्त जीवनपछि पनि बेलायतमा बस्दै आएका नेपालीको कामको मूल्यांकन गर्दै ‘डायमनशमशेर राणा’ फाउन्डेसनले उनलाई आगामी साता राजधानीमा सम्मान गर्ने भएको छ । फाउन्डेसनको सम्मान लिन नेपाल आएको अवसर पारेर नेपालीसँग कारोबार संवाददाता सञ्जय पन्थीले गरेको कुराकानी ः
सेवानिवृत्तपछिको जीवन कसरी विताइरहनुभएको छ ?
सन् २००६ (०६३ वैशाख ११ गते) मैले बीबीसी नेपाली सेवाबाट अवकाश पाएको हुँ । करिब ३ दशकको निरन्तर सेवापछि म स्वाभाविक प्रक्रिया अनुसारनै सेवाबाट निवृत्त भएको हुँ । सेवामा रहँदा समाचार संकलनदेखि कार्यक्रम प्रमुखसम्मको जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसर मैले पाएँ । मैले सेवाबाट अवकाश लिने दिनको एउटा रमाइलो प्रसंग छ । ०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलहरूलाई सत्ता सुम्पिएकै दिन बीबीसी नेपाली सेवाबाट मैले बिदा लिएको हुँ । त्यसपछिका मेरा दिन बेलायत र नेपालमा बित्दै आएका छन् । मेरा लागि सेवानिवृत्तपछिको जीवन साँच्चै आनन्ददायी र निष्फीक्री रूपमा रहेको छ । अंगे्रजीमा भन्नुपर्दा यो एक प्रकारको ‘क्वालिटी लाइफ’ हो ।
बेलायतमा मेरो दुई वर्षको सानो नाति छ । ऊसँगको दिनचर्या मेरा लागि सबैभन्दा आनन्ददायक रहन्छ । त्यसो त घरमै मात्र बसेर मैले दिन बिताएको छैन । सक्रिय जीवन बिताएको मान्छे, अझै पत्रकारितामा त्यसै किन बस्न सकिन्थ्यो र ! मैले जीवनमा सिकेको र पाएको कुरालाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचले ‘अडियो बुक’ सुन्ने किताब (किताबहरूमा स्वर भर्ने काम) को काम गर्ने निर्णय गरें । विदेशमा मैले त्यो देखेको थिएँ, तर नेपालमा त्यस किसिमको अडियो बुक थिएन । नेपालमै कसैले नगरेको काम भएकाले त्यही काम गर्ने निर्णयमा पुगे । त्यो निर्णयसँगै मैले आफ्नो विचार त्यसबेला नेपाल आएका बेला कनकमणि दीक्षितलाई सुनाए । उहाँले पनि राम्रो हुन्छ भनेर हौसला दिनुभयो, अनि मलाई पनि आत्मविश्वास बढ्यो ।
बेलायत फर्केपछि त्यो काम सुरु गरें । नेपालमा पनि भविष्यमा कामको सुरुवात पनि हुन सकोस् भन्ने चाहनाले यो काम सुरु गरेको हुँ । कमसे कम आधा दर्जन अडियो बुक तयार गर्ने योजना छ ।
अहिलेसम्म बीपी कोइरालाको ‘आत्मकथा’, डायमनशमसेरको ‘सेतो बाघ’ आनन्द अरुणको ‘सन्त गाथा’, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका ‘जन्मदेखि शून्य’ भन्ने संग्रहबाट ३३ कविता र अविरल बग्दछ इन्द्रावतीमा पनि स्वर भरेर ‘अडियो बुक’ तयार गरेको छु । किताब पढ्नुमा आफ्नै किसिमको आनन्द र मजा हुन्छ । तर अडियो बुकको छुट्टै पहिचान र महŒव रहने भएकाले मैले कामको साथै राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छु । अहिले पनि म आफ्नै काममा व्यस्त छु । यो काम कसैको दबाब र आय आर्जनका लागि भने गरेको हैन । नितान्त व्यक्तिगत रुचिले, स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नै किसिमले गरिरहेको छु । कुनै समय सीमामा अनुबन्धन नभई काम गर्दाको यो क्षण मेरा लागि आनन्ददायक छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा के भने सेवा निवृत्त जीवन भन्नेबित्तिकै बुढेसकाल भन्ने बुझिन्छ । अहिले म ६७ वर्षको भए यो उमेरसम्म मैले कुनै रोगको सामना गर्नुपरेको छैन । म स्वस्थ्य छु ।
नेपालमा कसैले नगरेको काम ‘अडियो बुक’को काम गर्दैछु भन्नुभयो । कसरी प्रेरित हुनुभयो यो कामप्रति ?
करिब ३० वर्षको बीबीसी नेपाली सेवाको काम गरें । त्यस क्रममा म धेरै बेलायत बसें । मैले त्यस क्रममा विभिन्न मुलुकको भ्रमणसँगै त्यहाँको भाषा संस्कृति र जीवनशैलीको अध्ययन गर्ने अवसर पाएँ । विकसित देशहरूमा पढ्ने संस्कृति व्याप्त छ । ‘प्रिन्ट’पुस्तक मात्र नभएर ‘अडियो बुक’ मार्फत पनि पढिँदो रहेछ । त्यो ‘भर्सन’ पढ्नेहरू धेरैजसो वृद्धवृद्धा हुँदा रहेछन् । तर, हामीकहाँ त्यो संस्कृति र परम्परा विकसित छैन । त्यसैले पनि सेवा निवृत्तपछिको जीवनमा त्यो काम गर्न म प्रेरित भएँ । जुन काम मैले नितान्त व्यक्तिगत तवरबाट गरिरहेको छु, कसैप्रति निर्भर हुनुपरेको छैन ।
‘प्रिन्ट भर्सन’ किताब पढ्नुको आफ्नै मजा छ । पाना पल्टाई–पल्टाई मन लागेको पेज, प्याराग्राफ र वाक्यांश आफूले चाहेजसरि पढ्न सकिन्छ । तर ‘अडियो बुक’ मा त्यो सुविधा हुँदैन, तर पनि एउटा राम्रो प्रस्तोताले शब्दको भाव नमर्ने गरी पढेको पुस्तकको हरफ सुन्दाको मजा पनि आफ्नै किसिमको रहन्छ । बीबीसीमा काम गर्दा प्रस्ट प्रस्तोताको हैसियत बनाएको अनुभवले पनि मलाई त्यो काम गर्न प्रेरित ग¥यो । पहिलो पटक आफ्ना निकटका साथीभाइको सुझावमा त्यो काम सुरु गरें । पहिलो अडियो बुक ‘बीपीको आत्मकथा’ थियो । त्यो सुन्ने स्वदेश तथा विदेशका पाठक–श्रोताले नेपाली भाषामा यसरी पुस्तक सुन्नुको मजै अर्कै हुँदो रहेछ भनेर प्रतिक्रिया दिइरहनुभएको छ । त्यसले मलाई थप हौसला मिलेको छ । मैले सेवाबाट अवकाश लिएपछि सञ्चारकर्मी भएर काम गर्न मन लागेन । त्यसैले नौलो काम गर्ने सोचले यो कामको सुरुवात गरेको हुँ । मैले तयार गरेका ‘अडियो बुक’ सुन्नेले राम्रो छ भनेर प्रतिक्रिया दिँदा आनन्द आउँछ । म पनि आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट छु । आफ्नो कामप्रति कुनै गुनासो छैन । सेवा निवृत्त जीवन जिउनेहरूका लागि मेरा ‘अडियो बुक’ अझ बढी खुराक बन्न सक्छ भन्ने मरो विश्वास छ ।
बीबीसी नेपाली सेवामा काम सुरु गर्दाको केही अनुभव सुनाइदिनस् न ?
सन् १९७९ मा प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएर म बेलायत पुगें । त्यहीबाट काम सुरु गरेको हुँ । बीबीसी नेपाली सेवाको पहिलो स्थायी नेपाली कर्मचारी पनि म नै हुँ । कार्यक्रम सञ्चालकका रूपमा मेरो नियुक्ति भएको हो । त्यसो त बीबीसी नेपाली सेवा सन् १९६९ बाट सुरु भएको हो, तर स्थायी कर्मचारीबिना नै कन्ट्याक कर्मचारीको भरमा चल्दै आएको थियो । रेडियो नेपालका कर्मचारी लगेर काम चलाउँदै आएको थियो । मिडिया अध्ययन गरेको जनशक्ति नै थिएन । म गएपछि मात्र व्यावसायिक रूपमा कार्यक्रमको खाका बनाउन सुरु गरें । दुई–चार जना साथी जम्मा गरेर ब्यवसायिक किसिमले काम सुरु गरें । त्यस बेला बीबीसीले ३७ भाषामा समाचार प्रसारण गथ्र्याे, तर अहिले कटौती भएर २७ भाषामा सीमित भएको छ । सुरुदेखि सन् १९९६ सम्म कार्यक्रम उत्पादक भएर काम गरें । त्यसपछि सन् २००६ सम्म नेपाली सेवाको कार्यक्रमको प्रमुख भएर काम गरें । त्यति बेला चार जना स्टाफमा सीमित थियो बीबीसी नेपाली सेवा, तर अहिले २०–२२ जना पुग्नुभएको छ । जनशक्ति र प्रविधिका कारणले पहिलेभन्दा अहिले काम गर्न धेरै सजिलो छ । बीबीसीले सधै ‘पहिलो’ हैन ‘दोस्रो’ हो भन्ने मान्यता राखेर काम गर्छ । पहिलो हुनुभन्दा प्रमाणित र सत्य समाचार प्रवाह गर्न दोस्रो भए पनि हुन्छ भन्ने मान्यताले निर्देशित छ । हतारमा भएको समाचार गलत पनि हुन सक्छ, त्यसैले बरु ढिलो होस्, गलत नहोस् भन्ने मान्यता बीबीसीले राख्छ ।
बेला–बेलामा बीबीसी नेपाली सेवा पनि बन्द हुने भन्ने हल्ला चलिरहन्थ्यो । बेलायत सरकारको अनुदानमा सञ्चालित सेवा भएकाले सरकारले बजेट कटौती गर्दा सन्त्रास छाउँथ्यो । कहिले बन्द हुने हो भनेर ! तर सौभाग्य भन्नुपर्छ बन्द भएको छैन । बन्द नहुनुका पछाडि नेपाली श्रोताको प्रतिक्रियाको ठूलो योगदान छ । जब–जब नेपाली सेवा बन्द हुने हल्ला चल्थ्यो नेपाली स्रोताको चिठी झोलाका झोला बीबीसी नेपाली सेवाको पोस्ट बक्स नम्बर ६७२ मा ओइरीरहन्थे । त्यसले गर्दा बीबीसी रेडियोका उच्च पदाधिकारीलाई पनि कति प्रभावकारी रहेछ नेपाली सेवाको कार्यक्रम भन्ने जानकारी हुन्थ्यो । नेपालमा एफम रेडियो सञ्चालन हुनुपूर्व सर्टवेभ र मिडियम वेभमा मात्र बीबीसी सुनिन्थ्यो । नेपालमा वि.सं. ०५५ सालमा रेडियो सगरमाथा सुरुभएपछि अब एफएम प्रसारणमा जानुपर्छ भन्ने योजना बन्यो । पहिलो पटक सामुदायिक रेडियो सगरमाथा र पोखराको त्यस बेला सञ्चालनमा आएको एक स्थानीय सामुदायिकमार्फत प्रसारण सुरु गरिएको हो । जुन अहिले सयौं एफएमबाट एकै समयमा प्रसारण भइरहेको अवस्था छ । बीबीसी नेपाली सेवाका श्रोताको संख्या करोडौं छ भन्न पाउँदा गर्व लाग्छ ।
बीबीसी आफैंमा विश्वसनीय समाचार संस्था हो, नेपाली राजनीति र शासन व्यवस्थाका बारेमा समाचार संकलन र प्रसारण गर्दाका अनुभव, नि !
तपाईंले भनेजस्तै बीबीसी आफैंमा विश्वसनीय समाचार संस्था हो । एउटा ‘सिस्टम’ (प्रणाली) बाट व्यावसायिक तबरमा काम गर्ने वातावरण छ । जहाँ काम गर्ने आफ्नै किसिमको शैली छ । कुनै भय र त्रास रहँदैन । स्वतन्त्र वातावरणमा काम गर्न छुट छ । साथै विश्वव्यापी पहुँच भएको एक अग्रणी समाचार संस्था हो । नेपाल र नेपाली भाषाका समाचार प्रसारण गर्दाको अनुभव भन्नु हुन्छ भने मैले काम सुरु गर्दा पञ्चायती व्यवस्था थियो । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि ०३६ सालको जनमतसंग्रहका बेला मेरो नियुक्ति भएको हो । त्यसबेलासम्म नेपालमा सरकारी सञ्चारमाध्यम रेडियो र गोरखापत्रले सरकारपक्षीय समाचार मात्र ‘कभर’ गर्ने र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई समर्थन गरिएका पत्रपत्रिकाले पार्टी समर्थित समाचार मात्र छाप्ने परम्परा थियो । अझ बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा ‘प्रोपोगन्डा’काल थियो । त्यस्तो बेलामा बीबीसीले प्रसारण गर्ने समाचार ‘ब्यालेन्स’ गर्नुपर्ने अवस्था थियो । पत्रकारिताको धर्मअनुसार समाचार ‘ब्यालेन्स’ नगर्दा एकपक्षीय हुनजान्छ । त्यो कुरालाई ध्यान दिएर कार्यक्रम प्रमुखको हैसियतमा काम सुरु गरें । नेपालका समाचारबारेमा एकपक्षीय भनेर शासक र पार्टीहरूबाट आलोचित हुनपरेन । पछि ०४६ सालको आन्दोलन सुरु भयो, त्यतिबेला नेपाली जनतामा ०३६ सालको भन्दा चेतनास्तरको अभिवृद्धि भइसकेको थियो । २४ घण्टामा एकपटक साँझ पौने ९ मा प्रसारण हुने बीबीसी नेपाली सेवा सुन्न घरघरमा रेडियो सुन्ने ठूलो समूह थियो । त्यतिबेला पनि हामीले प्रसारण गरेका समाचार विवादित भए भन्ने सुन्नुपरेन । हामीले व्यावसायिक तबरबाटै काम ग¥यौं, तर वि.सं. ०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डका बेला भने हामी त्यहाँ (नेपाली सेवा) स्रोत सेवा बनेर काम गर्नुप¥यो । हामीले विभिन्न भाषामा प्रसारण हुने समाचारहरूमा ‘अपडेट’ गराइरहन्थ्यौं । नेपालमा हाम्रो निरन्तर सम्पर्क रहन्थ्यो, तर त्यस दिनको समाचार बीबीसीमा सबैभन्दा ढिलो प्रसारण गर्ने ‘बीबीसी नेपाली सेवा’ बन्यो । किनभने घटना राति करिब ९ बजेतिर भएको रहेछ । त्यस दिनको हाम्रो प्रसारण सकिसकेको थियो । म पनि काम सकेर कार्यालयबाट फर्किसेकको थिएँ । अर्काे दिन राति नियमित समयमा (पौने ९ बजे) मात्र नेपाली भाषामा दरबारकाण्डको समाचार प्रसारण गरेका थियौं । पछि द्वन्द्वकालमा पनि नेपालका समाचार निरन्तर प्रसारण भैरहे । कहिल्यै समाचार प्रसारण गरेको भनेर नेपालका शासक र पार्टीहरूबाट कुनै धम्की र दबाब सहनुपरेन । किनभने बीबीसी नेपालभन्दा टाढा रहेको समाचार संस्था भएकाले पनि हुन सक्छ । अर्काे बीबीसीले प्रसारण गर्ने समाचार विभिन्न च्यानलबाट प्रमाणित भएर आउने भएकाले एकतर्फी हुने सम्भावना रहँदैन । स्वतन्त्र रूपमा समाचार संकलन तथा प्रसारण गरिह्यौं । पछि ०६२÷०६३को दोस्रो जनआन्दोलनका बेलासम्म मैले काम गरिरहें । एउटा प्रसंग राजा ज्ञानेन्द्रले ०६३ साल वैशाख ११ गते सत्ता दलहरूलाई हस्तान्तरण गरिरहेका थिए । त्यही दिनको समाचार पढेर मैले पनि बिदा लिएको हुँ ।
पछिल्ला तीन दशकका अवधिमा नेपालमा पटक–पटक भइरहेका राजनीतिक परिवर्तनसँगै बीबीसीमा रहँदा यहाँले सँगालेका केही अविस्मरणीय क्षणबारे बताइदिनु न ?
पछिल्ला तीन दशकको अवधिमा नेपालमा धेरै ठूला परिवर्तन भए । ०३६ साल अघिसम्म नेपालमा सञ्चारकर्मीसँग समाचारका विषयवस्तुमा खुलेर बोल्न सक्ने वातावरण थिएन । त्यसपछि समाचारका विषयवस्तुमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्ने क्रम बिस्तारै बढेको हो । राजनीतिज्ञदेखि समाजका प्रतिनिधि खुलेर सञ्चारमाध्यमसँग बोल्न थालेको मेरो अनुभव छ । पहिले त्यसरी मिडियासँग बोल्ने मानिसको अभाव हुन्थ्यो, ०३६ सालको जनमत–संग्रहपछि चेतनास्तर बढ्दै गए पनि ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बोल्ने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । आफ्नो तह र ओहदाभन्दा ठूला कुरा गरेर मिडियालाई विवादित बनाइदिने क्रम सुरु भयो । मिडियाकर्मीले विचार गरेर उनीहरूका भनाइ र विचार गरेर समाचारमा समावेश गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । अहिले नेपाली मिडियासामु ठूलो चुनौती छ । तर, पाठक, दर्शक र स्रोताको को कुरा गर्दा समाचारका विषयवस्तु बारेमा धेरै सचेत भएको अवस्था छ । के गलत र सही भन्ने कुरा तत्कालै छुट्ट्याउन सक्ने भएका छन् । बीबीसीको मेरो अनुभव सुुन्नु हुन्छ भने बेलाबखत नेपाली सेवा बन्द हुने हल्ला चल्दा श्रोताको लिखित प्रतिक्रियाका कारण नै बन्द हुनबाट जोगिएको हो । श्रोताकै कारण बीबीसी नेपाली सेवाले निरन्तरता पाएको हो । बन्द हुनै लागेको नेपाली सेवालाई निरन्तरता दिन नेपाली स्रोतको ठूलो भूमिका छ । उहाँहरूको त्यस किसिमको प्रतिक्रिया हुँदैनथ्यो भने आज प्रत्येक जिल्लाका सामुदायिक रेडियोबाट बज्ने बीबीसी नेपाली सेवा उहिल्यै बन्द भइसकेको हुन्थ्यो । अहिले सेवानिवृत्त भए पनि सबै नेपाली श्रोतालाई उनिहरुले पुर्याएको सहयोग र मायालाई पुनः एकपटक धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।